May 22, 2019 - PuraKhabar
घुस्याहा भन्दै मेयरले ढोका थुनेर कर्मचारी कुटे पछि बबाल, पत्रकार लाइ पनि छोडेनन्
May 22, 2019 Purakhabar News
इटहरी, ८ जेठ । इहटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले कर्मचारीले घुस खाएको भन्दै कुटपिट गरेपछि बबाल उत्पन्न भएको छ । कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वडा नम्बर १९ का वडा सचिव मनोज दाहाल र सब इन्जिनियर रामबहादुर खड्कालाई घुस आएको भन्दै कार्यालयको ढोका थुनेर कुटपीट गरेपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। कर्मचारीलाई कुटपिट गरेको मेयर चौधरीले स्वीकार गर्दै भ्रष्ट कर्मचारीलाई ठेगान लगाउन आफुले त्यसो गरेको बताएका छन् । बुधबार दिउँसो साढे दुई बजे तिर यो घटना भएको हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा कर्मचारी कुटिएका हुन् । उनले आफैले गाडी दिएर…
पुरुषलाई झुक्याउन महिलाले यस्ता झुठ बोल्छन् !
काठमाडौं, गल्ति लुकाउनका लागि झुठ बोलिँदा कहिले काँहि नकारात्मक असर पर्छ । हामी दैनिक स–साना गल्ति लुकाउन पनि झुठको साहारा लिइरहेका हुन्छौ । झुठ बोल्न पुरूष र महिला दुवै माहिर छन । यहाँ यस्ता झुठहरुको बारेमा चर्चा गरेका छौं, पुरूषलाई ठेस नपुर्याउन र पुरूषलाई आफूप्रति आकर्षित गर्न जुन महिलाहरुले बोल्ने गर्छन । – हो, म पनि तिमीसँग साथी बन्न चाहन्थे, म नराम्रो मान्दिन, मैले पनि यही सोचिरहेको थिए । – तिमी मलाई साह्रै राम्रो लाग्छ तर मलाई यो थाहा छैन् की म तिमीसँग साच्चै प्रेममा कहिले पर्छु । – यदी…
वीरगन्ज : बाराको परवानीपुर गाउँपालिका-१ बुनियाद टोलमा मानसिक सन्तुलन गुमाएकी १६ वर्षीया किशोरीलाई दुई युवकले सामूहिक बलात्कार गरेका छन्। सोमबार बेलुकी ८ बजे बुनियादमा पुगेकी युवतीलाई ३० वर्षीय रामअयोध्या मण्डल र उनका साथीले सामूहिक बलात्कार गरेका हुन्। बलात्कारमा संलग्नमध्येका मण्डल पक्राउ परिसकेका छन् भने उनका साथी फरार छन्। फरारको पहिचान खुलिसके पनि पक्राउ नपरेकाले उनको नाम सार्वजनिक नगरिएको बाराका प्रहरी नायब उपरीक्षक रन्जितसिंह राठौरले बताए। सोमबार बेलुकी बुनियाद गाउँमा रहेको नर्सरी नजिकैको सडकमा हिँडिरहेका बेला युवतीलाई प्रसौनी गाउँबाट साइकलमा घर फर्किरहेका मण्डल र उनका साथीले भेटेपछि साइकलमा चढाएर बाँसघारीमा लगेर…
दरबार हत्याकाण्ड हुनेबितिकै भारतीय सेना नेपाल छिर्न खोज्दा गिरिजाले यसरी रोकेका रहेछन् !
काठमाडौं, ८ जेठ । संसार हल्लाएको १९ जेठ, ०५८ को दरबार हत्याकाण्डका बेला अनुसन्धानको सहयोगका नाममा भारतीय सेना नेपाल छिर्न खोजेको खुलासा भएको छ । तत्कालिन राजा वीरेन्द्र शाहका पाश्र्ववर्ती सुन्दरप्रताप रानाको आत्मकथा ‘दरबारको दुखान्त’मा भारतीय सेनाले गरेको प्रस्तावबारे उल्लेख गरिएको छ । ‘भारतीय सेनाले अनुसन्धानको सहयोगका लागि नेपाल आउने अनुमति मागेको थियो, नेपालको तत्कालिन परिस्थितिमा छिमेकी मुलुकको सहयोग पनि हुन सक्थ्यो होला तर त्यसको नकारात्मक प्रभाव पनि पर्ने अवस्था थियो’, रानाले भावार्थमा लेखेका छन,‘तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले त्यस्तो अनुमति दिएन ।’ राजारानीसहित शाही परिवारका १० सदस्यको हत्या…
काठमाडौं । नेपाली युवा स्पीनर सन्दीप लामिछानेले क्यारेवियन प्रिमियर लिग बार्बेडर्स टाइडन्सबाट खेल्ने भएका छन् । बुधबार भएको ड्राफ्टमा उनलाई क्लबले बोली लगाएको हो । गत सिजन उनले सेन्ट किट्स एण्ड नभिस पेटि्रयर्सबाट खेलेका थिए ।
विश्वका अधिकांश मुलुकमा रहेका कारगारमा कैदी/बन्दी खचाखच भरिएका हुन्छन् । कतै त कारागार नभएर कोचेर कैदीलाई राख्नुपर्ने अवस्था छ । तर, विश्वमा यस्तो मुलुक छ जहाँ कारागारमा कैदी नभएर कारागार बन्द हुने स्थितिमा आइपुगेको छ । पश्चिमी युरोपेली देश नेदरल्याण्डमा घट्दो आपराधिक क्रियाकलापले त्यहाँ रहेका कारगार बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेदरल्याण्डको एक करोड ७१ लाख ३२ हजार जनसंख्यामा कारागारमा राख्ने अपराधी नै छैनन् । सन् २०१३ मा त्यहाँ १९ कैदीमात्र थिए । यद्यपी, जेल बन्द हुनुको मुख्य कारण भनेको नेदरल्याण्ड एक देश, एक प्रणाली, एक सरकार र नागरिकको…
काठमाडौँ : गत मंगलबार सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई भ्रष्टाचारको सङ्गीन आरोप लगाए। उनले बैठकमा कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाईन उपयोग गर्ने उद्योगी तथा व्यापारीहरुसँग बक्यौता रकम असुली गर्ने नाममा ९ अर्ब बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए। तर कुलमानले भने यस आरोपको कडा प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आफू कार्यकारी निर्देशक भएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आएपछि कुनै आर्थिक अनियमितता भएको प्रमाणित भए झुण्डिएर मर्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच विश्लेषक, लेखक एवं पत्रकार दिल निशानी मगरले अमनलाल मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिमा कुलमान…
बुटवलमा कतिपय व्यक्तिको देखाउने दाँत मात्र होटल व्यवसाय बन्दै आईरहे पनि मुख्य व्यवसाय भनेको यौनधन्दा हुने गरेको सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका बेला बुधवार इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले एक होटल सञ्चालकलाई यौनधन्दा चलाएको अभियोगमा पक्राउ गरि सार्वाजनिक गरेको छ । बुटवल–११ को कालिकानगरस्तिथ राप्ती मेनु होटल सञ्चालक टेकबहादुर कुँवर रउनकी श्रीमती मिनकुमारी बस्नेतलाई यौनधन्दा चलाउँदै आएको एक किशोरीको उजुरीका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरि पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजानिक गरेको हो । उनीहरुको घर बाग्लुङ्गको निसीखोला– ७ मा पर्दछ । ती दम्पत्तीले कपिलवस्तुकी १५ वर्षीया एक किशरोलाई गत ६ महिनादेखि बन्धक जस्तै बनाएर यौन…
काठमाडौं । संसद्ले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको राहदानी विधेयक–२०७५ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता गरेकी छन् । मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रमाणिकरणका लागि आएको राहदानी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमै फिर्ता गरिएको उल्लेख छ । गत असोजमा प्रतिनिधिसभाले सो विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरणका राष्ट्रपति कार्यालय पठाएको थियो । संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनुपर्ने भएपनि प्रतिनिधिसभाले मात्र स्वीकृत गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ (३) अनुसार पुनविचार गर्न फिर्ता पठाएकी हुन् ।
६१ वर्षिय बुलेट हुइक्याउने आमा : श्रीमान बितेको १४ दिनमै १६ श्रृंगार गरिन
६१ वर्षिय बुलेट हुइक्याउने आमा : श्रीमान बितेको १४ दिनमै १६ श्रृंगार गरिन , आज पनि लगाउछिन सिन्दुर पोते